DTD မှ TCDD Taşımacılık A.Ş. အထွေထွေမန်နေဂျာYazıcıသို့ | RayHaber
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီDTD မှ TCDD သို့Taşımacılık A.Ş. အထွေထွေမန်နေဂျာYazıcıသို့သွားရောက်ခြင်း
15 / 11 / 2019 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, Institute, တူရကီ, TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က
dtdden tcdd tasimacilik အထွေထွေဒါရိုက်တာအလည်အပတ်ခရီးပုံနှိပ်အဖြစ်
DTD မှ TCDD Taşımacılık A.Ş. အထွေထွေမန်နေဂျာYazıcıသို့သွားရောက်ခြင်း၊ TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ Kamuran Yazıcıအားအထွေထွေမန်နေဂျာနှင့်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့၏ဥက္ကas္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရပြီး DTD ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များကသူ၏ရုံးခန်းသို့ လာရောက်၍ အောင်မြင်မှုရလိုကြသည်။
TCDD Taşımacılık A.Ş. သည်မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသင်း၏အသင်း ၀ င်လည်းဖြစ်သည်။ နှင့်ရထားလမ်းကဏ္ related နှင့်သက်ဆိုင်သောပြissuesနာအားလုံးကိုအတူတကွသုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏စက်ခေါင်းဖြစ်သော TCDD Transport .A.Şနှင့်ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသင်းနှင့်နီးကပ်စွာဆက်သွယ်မှုရှိခြင်းနှင့်ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသင်းသည်ရထားလမ်းကဏ္forအတွက်အလွန်ကောင်းသောရလဒ်များရရှိလိမ့်မည်ဟုဖော်ပြထားသည်။
Mem မှ TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုအထွေထွေ
TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အထွေထွေမန်နေဂျာ Kamuran Yazıcı…
TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ အထွေထွေမန်နေဂျာ Kurt N
BTS မှ TTSD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ကို အထွေထွေမန်နေဂျာသို့သွားပါ
Jesus၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအရာရှိ - TC မှ TCDD ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ…
ပို့ဆောင်ရေး Veys Kurt ရဲ့နှစ်သစ်ကူးကို Message ၏ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ
Kurt, TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ
TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc. အထွေထွေမန်နေဂျာ Kurt သည်Tekirdağ၌တည်ရှိသည်။
TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ အထွေထွေမန်နေဂျာ Veysi Kurt …
Kurt, TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc. ၏အထွေထွေမန်နေဂျာıalışan
TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc. အထွေထွေမန်နေဂျာ Kurt's Ramadan …
Veysi Kurt, TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ
Erzurum အတွက် TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုမှ General Manager က Kurt Veys
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က အထွေထွေမန်နေဂျာ